ပုံနှိပ်၊ သတင်းနှင့် မီဒီယာ – Rakhine Commision
ပုံနှိပ်၊ သတင်းနှင့် မီဒီယာ
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ကော်မရှင်
အောက်ဖော်ပြပါ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ကော်မရှင်မှ နောက်ဆုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ဖတ်ရှုရန်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် – သြဂုတ်လ၊ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကိုဖီအာနန်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ကော်မရှင်တွင် ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူ
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန်၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုများ အပေါ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အထူးစိုးရိမ်မိပြီး ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်များ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုများရဲ့ ပြင်းထန်မှုနဲ့ ဖြစ်ပွားတဲ့ အတိုင်းအတာ အရ အကြမ်းဖက်မှု ဆိုးဝါးလာမှုဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အကြား ပဋိပက္ခတွေ တိုးမြှင့်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်။ ယင်းသို့ ရက်စက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ အတွက် ဘယ်လို အကြောင်းရပ်နဲ့မှ တရားမျှတအောင် လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဟာ ယင်းတို့ လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များကို အခြေအနေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ ထိခိုက်မှုမရှိရေး သေချာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံဖို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ အဖွဲ့အားလုံးကို အလေးအနက် တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ လုံခြုံမှုနဲ့ တည်ငြိမ်မှုနှစ်ပေါင်းများစွာ မရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အကြမ်းဖက်မှုဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကြုံနေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အတွက် အဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းလင်းပြတ်သားလှပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ မြန်မာအစိုးရသို့ တင်ပြမည့် အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြမည့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် မီဒီယာများအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ နေ့ရက် ။ ။ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် (ကြာသပတေးနေ့) နေရာ ။ ။ ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၊ ပထမထပ်ခန်းမ (၂)။ အချိန် ။ ။ ညနေ ၄ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီအထိ။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာတွင် ပဋိပက္ခ ကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးအပ်ခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု စသည်တို့ အပါအဝင် ကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်အတွင်း အကျုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်များကို ပြုလုပ်သွားပါမည်။ အကြံပြုချက်များတွင် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ချက်ခြင်း အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အကြံပြုချက်များနှင့် ရေရှည် လုပ်ဆောင်သွားရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြံပြုချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်သူအားလုံး၏ လူမှုဘဝပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးအတွက် အကြံပြုချက်များအဆိုပြုနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်ကို ပြည်တွင်း ပညာရှင် ၆ ဦး၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင် ၃ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကိုဖီအာနန်မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ …
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ယမန်နေ့က တပ်မတော် ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ် တစ်စင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် ပျက်ကျခဲ့မှုကို ကြားသိရသည့်အတွက် ကော်မရှင်က အထူး တုန်လှုပ်ဝမ်းနည်းမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးသူများအနက် ကလေးငယ် အမြောက်အမြား ပါဝင်နေသည့် အတွက် များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသူများ၏ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်များ၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများအတွက် အထူးစာနာဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည့် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တပ်မတော်သားများ အားလုံးနှင့် ပြည်သူများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ကော်မရှင်မှ ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန်၏ ထုတ်ပြန်ချက်၊ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပွဲ
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် မိတ်ဆက် မှတ်ချက်ပြုပါရစေ။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြပ်အတည်းရဲ့ သဘောသဘာဝဟာ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လုံခြုံရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီတွေရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ အကြံပေး ကော်မရှင် အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်က ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရေရှည် အဟန့်အတားများအပေါ် အဓိကထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပြည်သူများ ကြုံတွေ့ရနေတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများဟာ ရှုပ်ထွေးကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ်ပြုပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ အဖြေရှာဖွေရေးမှာ စိတ်ဆုံးဖြတ်မှု ရှိခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်းနဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိခြင်းတို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အတိုင်း ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ အဆင့်တွေလဲ ရှိပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီရင်ခံစာက အဆိုပြုထားပါတယ်။ အကြံပြုချက်တွေထဲမှာ သတင်းထောက်များနဲ့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသူများကို ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နယ်မြေဒေသတွေဆီ အတားအဆီးမရှိ သွားရောက်ခွင့် ပေးဖို့နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်များကိုလည်း လွတ်လပ်ပြီး ဘက်မလိုက်တဲ့ …
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာ
The Advisory Commission on Rakhine State would like to invite you toaPress Conference forapresentation of its interim recommendations for the Myanmar government. Date: March 16, 2017 (Thursday) Where: Sule Shangri-La, Ground Floor, Bago Room. Time: 4pm These recommendations describe the steps the Myanmar government can take to immediately improve the situation on the ground in Rakhine, while the final report will contain more long-term recommendations. The Government of Myanmar has mandated the Commission to propose recommendations for improving the welfare of all people in Rakhine state. It is composed of six local and three international experts, …
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ဖိတ်ကြားစာ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ မြန်မာအစိုးရသို့ တင်ပြမည့် ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြမည့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် မီဒီယာများအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ နေ့ရက်။ ။ ကြာသပတေးနေ့၊ မတ်လ ၁၆ ရက်။ နေရာ ။ ။ ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း – ပဲခူး။ အချိန်။ ။ ညနေ ၄ နာရီ။ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အခြေအနေ တိုးတက်လာစေရန် မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် လတ်တလော အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အဆင့်များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အဆင့် အကြံပြုချက်များတွင် ရေရှည် အကြံပြုချက်များ ပိုမိုပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်သူ အားလုံး၏ လူမှုဘ၀ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးအတွက် အကြံပြုချက်များ အဆိုပြုနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်ကို ပြည်တွင်း ပညာရှင် ၆ ဦး၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင် ၃ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကိုဖီအာနန်မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ကော်မရှင်၏ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနိုင်ရန် ကော်မရှင်၏ Facebook စာမျက်နှာ နှင့် Twitter အကောင့် (@RakhineComm) တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များကို သိလိုပါက Sithu Soe Tint …
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သတ်ဖြတ်မှုအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန် ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လူအများ လေးစားရတဲ့ ရှေ့နေဦးကိုနီ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရမှုနဲ့ သေနတ်ပစ်သူကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရင်း သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ ဖြစ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကွယ်လွန်သူများရဲ့ မိသားစုများနဲ့ မိတ်ဆွေများထံသို့ အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ တုန်လှုပ်စရာကောင်းပြီး ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူတွေ အပေါ် အကြမ်းဖက်ခြင်းဟာ စက်ဆုပ်ဖွယ် ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိနေပါစေ၊ အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သည်းခံခြင်းတို့နဲ့သာ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုဟာ အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ ဆိုးဝါးလှတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို တောင်းဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန်၏ မိန့်ခွန်း
ရန်ကုန်မြို့ – ကျွန်တော်တို့ဟာ စက်တင်ဘာလကစပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က လူငယ်အုပ်စုတွေ၊ ရပ်ရွာလူကြီးတွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အမျိုးသမီး အစုအဖွဲ့တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ စတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းအများအပြားနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ရခိုင်ဒေသက အသိုက်အဝန်း အသီးသီး အကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ စီးပွားရေး လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကြွယ်ဝလှတဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ စောင့်ရှောက်ဖို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စရပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီးနဲ့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ယနေ့ မနက်ပိုင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို သတိမူနိုင်စေဖို့ ထပ်မံ သတိပေး ပြောပြလိုပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အားပေး မြှင့်တင်နိုင်ဖို့၊ ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းစေဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက် ရရှိစေဖို့၊ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းဖို့၊ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ ပေးဖို့ ဘယ်လိုအားပေး မြှင့်တင်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို နိုင်ငံတော် အစိုးရထံ အကြံပြုချက်များ တင်ပြပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကြည့်ရင် …
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်ရန် မီဒီယာများအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ နေ့ရက်။ ။ အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်။ နေရာ ။ ။ ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း - ပဲခူး။ အချိန်။ ။ ညနေ ၄ နာရီ။ ယခုသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ စတင်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ် (နိုဝင်ဘာလ ၃၀ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်အထိ) နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ် ( ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အထိ) ၏ အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံ ခေါင်းဆောင်များ၊ လူငယ်အဖွဲ့များ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်သူများအပါအဝင် ဒေသခံ ရွာသားများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကြံပေး ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတနှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တို့နှင့် (ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ၆ ရက်) နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံရန်လည်း စီစဉ်ထားပါသည်။ ကော်မရှင်၏ နေ့စဉ် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို … Continue reading
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ကော်မရှင်အား ဆက်သွယ်ရန်
ကိုဖီအာနန်၊ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ
ကိုဖီအာနန်သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ သတ္တမမြောက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်းများထဲမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်လာသည့် ပထမဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို ကိုဖီအာနန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းကြီးတို့မှ ပူးတွဲရရှိခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ အာနန်သည် ကိုဖီအာနန် ဖောင်ဒေးရှင်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။Continue reading
ဦးဝင်းမြ၊ ပြည်တွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဦးဝင်းမြသည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ စတင်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ကာလရှည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ၁၉၆၇ မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကြားကာလများတွင် ဘန်ကောက်၊ ဖနွမ်ပင်၊ ပါရီတို့ရှိ သံရုံးများ၊ ဂျနီဗာနှင့် နယူးယောက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးများတွင် ရာထူး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပြီး ၉ လကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ နယူးယောက်မြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်းမှာပင် သူသည် ကျူးဘားနှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ရာထူးကိုပါ ပူးတွဲတာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမတိုင်မီ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်တွင် ဦးဝင်းမြသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အပါအဝင် မြန်မာထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များအားလုံး၏ အနီးကပ်ဘာသာပြန်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။Continue reading
ဒေါက်တာသာလှရွှေ၊ ပြည်တွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာသာလှရွှေသည် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၀ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးမှုပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ၏ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ကာလရှည်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်လူမှုရေးဆေးပညာ၏ ပါမောက္ခဌာနမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ တက်ကြွအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်အကြံပြုရေးကော်မရှင်တွင်လည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ဒုချီးရားတန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာသာလှရွှေသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှ MBBS ဘွဲ့နှင့် Preventive and Tropical Medicine ပညာရပ်တွင် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ၊ London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK မှ Clinical Medicine of the Tropics ပညာရပ်တွင် ဒီပလိုမာနှင့် University of Southern California, United States မှ Msc. (Education) ဘွဲ့များရရှိထားပါသည်။Continue reading
ဦးအေးလွင်၊ ပြည်တွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဟာဂျီ ဦးအေးလွင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်၏ အကြီးအကဲနှင့် ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဗဟာဒူး ရှား ဂူဗိမာန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက ကမကထပြုသည့် ဟာ့ဂ်ျ ခရီးသွားအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ဆူဖီအစဉ်အလာများကို အလွန်တရာ စိတ်ဝင်စားပြီး ခလီဖာ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဝိညာဉ် နည်းပြ အဖြစ်လည်းကောင်း Qadariya Aarliya Sufi တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေပါသည်။ သူသည် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် အခြားဘာသာများအကြောင်း စာအုပ်များ ရေးသားခြင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ကျင်းပသည့် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် စာတမ်းများဖတ်ကြားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် မွေးရပ်မြေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပဋိပက္ခ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ပညာရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည့် ဟာဂျီ ဦးအေးလွင်သည် ကာယကြံ့ခိုင်ရေးပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပြီး ရန်ကုန်ရှိ Diplomatic School တွင် စီမံခန့်ခွဲမှု ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။Continue reading
ဒေါက်တာ မြသီတာ၊ ပြည်တွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာမြသီတာသည် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏ သားဖွားနှင့် မီးယပ်ပညာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးရုံများတွင် မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးပညာသင်ကြားရေး ဆရာမအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးသူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သုသေသီအဖြစ်လည်းကောင်း နှစ်ပေါင်း ၃၃ နှစ်ကျော်ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာမြသီတာသည် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ (၂) နှင့် မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်ရှိ သားဖွားနှင့် မီးယပ်ပညာ ဌာနများ၏ ဌာနမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ၊ သားဖွား မီးယပ်ပညာရှင်များ၏ တော်ဝင်တက္ကသိုလ် (Royal College of Obstetricians and Gynecologists) တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတော်ဝင်တက္ကသိုလ်၏ မိသားစုစီမံချက်နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး မဟာဌာန (Faculty of Family Planning and Sexual Health) ၏ အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Myanmar Medical Journal of Current Medical Practice ၏ တည်းဖြတ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ မိခင်နှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဌာန၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဦးခင်မောင်လေး၊ ပြည်တွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်လေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု မပြုခင်က အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ သုတေသနနှင့် စီမံရေးရာ ဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနတွင် ကာလရှည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှူး၊ အကြီးတန်း လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိ၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးများတွင် အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးခင်မောင်လေးသည် ရန်ကုန်နည်းပညာ သိပ္ပံကျောင်းတွင် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ကို လေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့ပြီး BE (Mechanical) ဘွဲ့ရရှိထားပါသည်။Continue reading
ဒေါ်စောခင်တင့်၊ ပြည်တွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်စောခင်တင့်သည် လက်ရှိတွင် ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ရန်ကုန်) နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးဒုက္ခ ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရခိုင်အမျိုးသမီး အသင်း (ရန်ကုန်) နှင့် ရခိုင် တောင်သူ လယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီတို့တွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများစွာကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ ကြွယ်၀ပြီး ရခိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တစိုတ်မတ်မတ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် လူအများ၏ လေးစား အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိထားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ရခိုင်အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အထူးစိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ B.Ed ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် အထက်တန်းပြ ဆရာမအဖြစ် ၁၇ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။Continue reading
ဂါဆန် ဆာလမ်မေ၊ ပြည်ပ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဂါဆန် ဆာလမ်မေသည် Sciences-Po (Paris)ကျောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာန၏ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါရီနိုင်ငံတကာ ရေးရာကျောင်း (PSIA) ကို ထူထောင်သူ မဟာ ဌာနမှူးကြီး ဖြစ်သည်။ သူသည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ အမျိုးသား အမွေအနှစ်များနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးအဖြစ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပသည့် အာရပ်ညီလာခံ၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပသည့် Francophone ညီလာခံတို့တွင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဆာလမ်မေသည် အီရတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်၏ နိုင်ငံရေး အကြံပေးအဖြစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ တစ်ကြိမ် ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် International Crisis Group ၏ ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Open Society Institute ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ယူထားသည်။ သူသည် Phenix ၊ ADELFI နှင့် Al-Idrissi ဆုများ ချီးမြှင့်ခြင်းခံထားရသည့်အပြင် Medaille of the Academie Francaise ဆုတံဆိပ်ကိုလည်း ၂၀၀၃ …Continue reading
လက်တီတီရာ ဗန်ဒန် အာဆမ်၊ ပြည်ပ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
သံအမတ်ကြီး လက်တီတီရာ ဗန်ဒန် အာဆမ်သည် နိုင်ငံတကာရေးရာနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံများစွာ ကြွယ်၀ပြီး နှစ်ရှည်လများစွာ သံတမန်တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် နယ်သာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၆ ခုနစ်တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီး ဗန်ဒန် အာဆမ်သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁၉၇၇ ခုနစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ ပထမဦးဆုံး သံအမတ်အလုပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ ကြာခဲ့ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်း သံအမတ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါသည်။ သံအမတ်ကြီး ဗန်ဒန် အာဆမ် ဒုတိယတာဝန်ကျရာနေရာမှာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်ကာ ၄ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် HIV/AIDS ရောဂါဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အထူးစိတ်ဝင်တစားကိုင်တွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သူမသည် ကမ္ဘာ့ကာလသားရောဂါ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ကိစ္စရပ်များအတွက် အထူးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရပါသည်။ သူမအနေဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်အဖြစ် ကင်ညာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၂ အထိ နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ ဆက်တိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီး …Continue reading